Kaaliyaha Google wuxuu Siri dul saarayaa xadhkaha wuxuuna gaadhayaa taleefannada casriga ah oo badan | Wararka IPhone
Google Assintant wuxuu ka tagayaa lahaanshaha Pixel wuxuuna u boodboodayaa casriga badan
Kaaliyaha Google waa sharadka weyn ee teknoolojiyadda adduunka ee sirdoonka farsamada. The sida aan ula xiriirno wax soo saarka tikniyoolajiyadeed ee inagu hareeraysan Aad ayey muhiim ugu noqonaysaa soosaarayaasha -waxeyna kasii badnaan doontaa mustaqbalka dhow-, gaar ahaan kuwa gacanta ku haya xog aad u muhiim ah maalin kasta, sida Google iyo, in yar, Apple.
Maanta waxaan ogaanay in Kaaliyaha Google uu sameyn doono boodboodka waqti aan dheerayn (wuxuu u bilaaban doonaa toddobaadkan Mareykanka waxaana lagu kordhin doonaa dalal badan bilaha soo socda) ilaa taleefannada casriga ah. Sidaas ayaa kudhameysa gaar ahaanta illaa iyo hadda leh Google Pixel, taleefanka ay soo saartay sumadda iyo tan, oo ay weheliso Google Home, Allo iyo aalado wata Android Wear, ayaa lahaa kii ugu horreeyay ee kaaliyehan.
Telefoonada gacanta oo leh Android 7.0 Nougat iyo 6.0 Marshmallow waxaad bilaabi doontaa inaad ku raaxaysato Kaaliyaha Google, In lagu daro kuwa kale bilowgii, sida LG G6, HTC 10, LG V20 ama Samsung Galaxy S7 (markaa waxaan u maleyneynaa- in sidoo kale lagu dari doono Galaxy S8 ee soo socota). Laga soo bilaabo Google waxay muujinayaan waxtarka kaaliyahaan iyo sida ay nooga caawin karto howlo badan iyo howlo aan qabano maalinle.
Ballaadhintan kaaliyaha Google ayaa caqabad hor leh ku ah Apple iyo Siri, kuwaas oo ayaa lagu eedeeyay muddooyinkii ugu dambeeyay inay ku sii jiraan xaalad "fadhiid ah" taas oo ku samaynaysa shirkadda Cupertino xumaan ka dhan ah kuwa ay sida tooska ah xafiiltamaan. Tim Cook, Maamulaha Apple, ayaa muujisay xiisaha xaqiiqda la kordhiyay dhowr jeer bilihii la soo dhaafay iyo sirdoonka macmalka ah ee kala duwanaanshaha mustaqbalka, sidaa darteed iPhone-ka soo socda ayaa la filayaa inuu noqdo horusocod tayo leh oo la xiriira arrintan sidoo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Google Assintant wuxuu ka tagayaa lahaanshaha Pixel wuxuuna u boodboodayaa casriga badan
Samsung waxay diiradda saareysaa inay la tartanto iPad Pro ee MWC 2017